Vaovao ratsy fotsiny no nanaloka ny fianakavian'i Brigitte Macron
Vaovao ratsy fotsiny no nanaloka ny fianakavian'i Brigitte Macron. Azo inoana fa ny vadiny taloha André-Louis Auzière no naka aina farany. Marihina fa miaraka ny vehivavy voalohany sy ny vadiny taloha nanan-janaka telo.
Ny gazety Paris Match no nanambara ny vaovao, taorian'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny faralahy amin'ny fianakaviana. Na izany aza, ny nahagaga ny rehetra dia ny fanjavona izay efa nanomboka tamin'ny taon-dasa, tamin'ny desambra. Fahaverezana izay nanapa-kevitra ny fianakaviany hitandrina miafina araka ny fanirian'ny maty.
Ny fanjavonan'i André-Louis Auzière
Raha ny filazan'i Tiphaine Auzière dia efa nandevina ny rainy izy tamin'ny 24 desambra tamin'ny tsiambaratelo tanteraka. Eny tokoa, notazonin'izy ireo tsiambaratelo io fanjavonana io, satria tian'ilay banky atao ny tsy hitonona anarana. Tsiambaratelo nanintona ny mason'ny rehetra ny tsiambaratelo izay manjaka manodidina ny hetsika.
Eny tokoa, nifankahita voalohany i Brigitte Macron sy André-Louis Auzière tamin'ny takariva voalohany niaraka tamin'ny namany akaiky. Raha vao jerena, dia nifankatia avy hatrany izy ireo. Araka izany, tamin'ny 22 Jona 1974, dia nanapa-kevitra ny hanambatra ny hoavin'izy mivady izy mivady. Ka niaraka izy telo mianadahy: Sébastien, Laurence ary Tiphaine. Rehefa nandeha ny fotoana dia leo ilay monotony ilay mpampianatra frantsay tamin'ny fiainany nanambady. Ny antony niafarany naka olon-tiana teo amin'ny mpianany, ilay tanora Emmanuel Macron. Tovolahy nanambara ny fitiavany azy.
Brigitte Macron, noterena hijery tsara
Rehefa nahita ny fahafatesan'ny vadiny taloha, Brigitte Macron dia voatery naneho tsiky feno hafaliana. Eny tokoa, tamin'ity ora ity dia nandray ny vadin'ny filoham-pirenena meksikana, Andrés Manuel López Obrador, ny vehivavy voalohany. Resadresaka ho an'ny fanomanana ny fitokanana ny fampirantiana "The Olmecs and the Cultures of the Gulf of Mexico".
Hetsika izay notontosaina tamin'ny 9 Oktobra tao amin'ny Quai Branly Museum. Ho fanampin'izay, ny renim-pianakaviana manan-janaka telo dia tsy naneho fanehoan-kevitra momba io fanjavonana io. Na izany aza, nanaiky ny hiresaka momba ny asany amin'ny maha praiminisitra frantsay azy izy. Tampoka teo, hoy i Brigitte Macron, dia fiasa tena mifantina izay mahatonga azy handao ny asany amin'ny maha-vehivavy azy voalohany.
Voa ho an'ny ho avy: ny cuvée faha-5 nomem-boninahitra tany Yaoundé
Nolavin'i Moalim Touré ny nifaneraserany tamin'i Embaló hanampy an'i Dalein: "ratsy izany" - Video